साहनी ग्रुपद्वारा नेपाल बैंकको कर्जा भुक्तानी, धितो फुकुवामा आनाकानी - Prabhav Khabar
साहनी ग्रुपद्वारा नेपाल बैंकको कर्जा भुक्तानी, धितो फुकुवामा आनाकानी
काठमाडौं– साहनी ग्रुपले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज तथा विशेष अदालत, काठमाडौंले तोकेको बिगोसमेत गरी सबै रकम बुझाउँदासमेत आफ्नो धितो फुकुवा नभएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । साहनी ग्रुपका सञ्चालक मोहन साहनीको नामबाट बिगो रकमसहित १९ करोड ६ हजार ४५ रूपैयाँ ८३ पैसा असुलउपर गरेर धितो फुक्का गर्न अदालतले १३ कात्तिक ०६२ मा नेपाल बैंकलाई आदेश दिएको भए पनि बैंकले धितो फुकुवा नगरेको भन्दै राजधानीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यसो त यस प्रकरणमा नेपाल बैंकको १ अर्ब ८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ जोखिममा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन निरीक्षण प्रमुख राजनसिंह भण्डारीको नेतृत्वले गरेको कर्जा छानबिनमा ३६५ वटा फाइलहरूमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनपछि नेपालले चार वटा फाइललाई मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि पठाएको पाइएको देखिन्छ । नेपाल बैंकले प्रतिवेदनमा दोषी ठहरिएका ३ सय ६५ फाइलमध्ये साहनी ग्रुप, लक्ष्मी आचार्य ग्रुप, विजय लोहनी ग्रुप र विश्वप्रिय मल्ल ग्रुपको मात्र फाइल कारबाहीका लागि अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
यसबाट नेपाल बैंकले बाँकी रहेका ३ सय ६१ फाइलबाट सबै कर्जा असुल उपर गरिसक्यो कि प्रतिवेदनमै सीमित ग¥यो त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने देखिए पनि यसबारे सम्बन्धित निकाय मौन बसेको देखिन्छ । ती मध्ये पनि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले साहनी ग्रुपको फाइललाई मात्र अनुसन्धानमा अगाडि बढाएको बुझिएको छ । १९ करोड रूपैयाँ खराब कर्जाको फाइलमा साहनी ग्रुपले धितोबापत राखेको जग्गालाई अख्तियारले अनुसन्धानकै क्रममा पनि रोक्का नराखेपछि नेपाल बैंकले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको बेलामा बेचबिखन गरी आफूले लिनुपर्ने रकम उठाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ । तर, न्यायिक प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा धितोबापत राखेको अचल सम्पत्ति बैंकले कसरी बेचबिखन गरेको हो ? त्यसरी बेचबिखन गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? प्रश्न खडा भएको सञ्चालक साहनीले प्रश्न गरेका छन् ।
विशेषको सो फैसलाउपर बैंक सर्वोच्च गएपछि २ कात्तिक ०७३ मा सर्वोच्चमा पनि विशेषकै फैसला सदर भएको थियो । यद्यपि बैंकले अहिलेसम्म उक्त मुद्दामा बिगोबापतको रकम बुझिसकेपछि पनि साहनीको धितोबापतको सम्पत्ति फिर्ता नगरेको साहनीको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बिगो तिरे पनि नेपाल बैंकले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नगरेको भन्दै व्यवसायी साहनीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले अदालतको आदेशअनुसार आफूले बिगो तिरेको तर बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको बताए ।
उनले जतिसक्दो छिटो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । साहनीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको भुक्तानी भइसकेकाले धितो फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दछु ।’ बैंकमा धितो राखिएको करोडौँको सम्पत्तिको बिगो तिरिसकेकाले फिर्ता पाउनुपर्ने उनले माग राखे । साहनीले १५ असोज ०७८ मा २६ करोड रूपैयाँ बिगो बैंकमा तिरेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार १९ करोड बिगोसहित जम्मा २६ करोड रूपैयाँ तिरेँ, तर आजसम्म बैंकले मेरो ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता गरको छैन,’ उनले भने ।
साहनी समूहअन्तर्गत उनले १९ करोड बिगो तिरेपछि बैंकले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको पाइएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा अदालतको आदेशअनुसार हुनुपर्ने बताए । आफूजस्तै बैंकपीडितको समूह धेरै रहेको भन्दै सम्पत्ति फिर्ता गर्न आलटाल गदै समस्या समाधान नगरे सबै मिलेर बैंक घेराउ हाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले कमसल धितो ‘ओभर भ्यालुएसन’ गराएर साहनी समूहको ९९ रोपनी जग्गालाई ‘जिरो भ्यालू’ बनाएकोसमेत आरोप लगाएका छन् । ‘नेपाल बैंकका बोर्ड अध्यक्ष लोकभक्त राणा, बोर्ड सचिव अमर खड्का, जिएम भवानी उपाध्याय र असुलीका किरणकुमार श्रेष्ठ भएको पनि उनले बताए । उनीहरूको पालामा कर्जा छानबिनमा परेको बताएका छन् ।
०५८ सालमा मुद्दा दर्ता भएको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था तुरुन्त बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै उनले बैंकले सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । अदालतमै मुद्दा हुँदै गर्दा बैंकले जग्गा बेच्न नपाउने उनको तर्क छ । साहनीले नेपाल बैंक राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्दै त्यहाँको कर्मचारीहरूको दोष हो भन्दै कर्मचारीहरूलार्ई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्चले फैसला गरेअनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने उनको माग छ । अदालतले गरेको निर्णयअनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गरेर न्याय दिन उनले आग्रह गरे । उनले आफूले २२ वर्षअगाडि साढे ९ करोड साँवा लिएको भन्दै साँवाको ब्याजसहित १९ करोड बिगो तिरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले ०६२ देखि ०६४ सम्ममा बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको बताए । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भई कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा आफ्नो धितो फिर्ता दिनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
Published On: Wednesday, November 24, 2021 Time : 2:40:21
स्याङ्जामा सुन्तला सुपरजोनको क्षेत्र बिस्तार
नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै,३ अंकले नेप्से घट्दा पौने ४ अर्ब कारोबार
गलकोटको विकासबारे अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि,१.८९ अंकले नेप्से बढ्दा ४ अर्ब बढीको कारोबार